के हो पार्किन्सन्स रोग? कस्ता हुन्छन् यसका लक्षण? – Health Post Nepal
के हो पार्किन्सन्स रोग? कस्ता हुन्छन् यसका लक्षण?
२०७८ चैत २८ गते १४:५७
पार्किन्सन्स एक खालको न्यूरोडिजेनेरेटिभ डिस्अर्डर हो, जसको लक्षण विस्तारै र निकै समयपछि देखा पर्छ। यसमा बिरामीको मोटर स्कील्समा असर पर्छ। किनभने यो रोगमा केन्द्रीय स्नायू प्रणाली नै प्रभावित हुन्छ।
कस्तो हो यो रोग?
कम्पन, कठोरता, हिँड्न समस्या पार्किन्सन्सको सुरुवाती लक्षण हो। यो रोग मुख्य रुपमा डोपेमाइन उत्पन्न गर्ने न्युरोन्समा आक्रमण गरेर त्यसलाई प्रभावित पार्छ। पार्किन्सन रोगले मानसिक समस्याहरु जस्तै, डिप्रेसन, एन्जाइटी, नर्भसनेस पनि उत्पन्न गर्छ।
हात, खुट्टा, अनुहारमा कम्पन उत्पन्न हुनु, मांसपेशी कडा हुनु, सानातिना कुरा बिर्सनु, स्वभावमा परिवर्तन हुनु यसका प्रमुख लक्षण हुन्। यसमा गति धिमा हुनुका अलावा हिँड्ने र सन्तुलन बनाउन पनि समस्या हुन्छ। रोग बढ्दै जाँदा बिरामी डिप्रेसन र डिमेन्सियाको शिकार हुन्छन्।
यसलाई मुभमेन्ट डिस्अर्डर पनि भनिन्छ। अधिकांश यो समस्या वृद्धावस्थामा हुन्छ। तर यो रोग कम उमेरका मानिसमा पनि देखिन थालेको छ। एक तथ्यांकअनुसार यो रोगबाट विश्वभर १ करोडभन्दा बढी मानिस प्रभावित छन्।
विज्ञहरु यसका लागि जेनेटिक र पर्यावरण प्रमुख कारक मान्छन्।
यसमा प्रमुख लक्षण निम्न छन्ः
झडका लाग्नुः यो आमरुपमा हुने लक्षण हो। कहिलेकाही हिँडिरहेको समयमा पनि अचानक झड्का लागेजस्तो महसुस हुन्छ। खुट्टामा करेन्ट लागेजस्तो अनुभव हुन्छ, जसबाट लड्ने या सन्तुलन बिग्रन्छ। वास्तवमा यो नशामा हुने समस्याबाट सिर्जना हुनसक्छ। यस्ता लक्षणमा ध्यान नदिए पछि गम्भीर समस्यासमेत उत्पन्न हुनसक्छ।
लेख्ने शैली परिवर्तन हुनुः लेख्ने शैलीमा आउने परिवर्तन पनि पार्किन्सन्स रोगको प्रमुख लक्षण हो। यो रोगमा दिमागसँग सम्बन्धित गतिविधिमा अलग–अलग प्रकारको सिंग्नल प्राप्त हुन्छ। जसमा अक्षरको बनावट सही तरिकाबाट बन्न पाउँदैन। कलम समाउन समस्या हुनसक्छ।
गन्ध थाहा नपाउनुः कुनै चिजको गन्ध थाहा नपाउनु पनि पार्किन्सन्स रोगको लक्षण हुनसक्छ। साधारणतय रुघा लाग्दा केही दिन यो समस्या रहन्छ। तर पार्किन्सन्स रोग लागेका व्यक्तिले कैयौ दिनसम्म गन्ध थाहा नपाउनसक्छन्।
मांसपेशी बाँउडिनु: अक्सर एकै स्थानमा बसेर टीभी हेर्दा पिठ्यु, कम्मर र हातखुट्टाको मांसपेशी अड्कन्छ। लकडाउनका क्रममा अधिकांश मानिसले यो समस्या महसुस गरे। तर यदि यस्तो समस्या मांसपेशीमा सधैजसो देखिए पार्किन्सन्स रोगको लक्षण हुनसक्छ।
सुस्तताः हरेक काम ढिलो गरी गर्नु पनि यो रोगको लक्षणमा पर्न सक्छ। यो रोगमा सुस्त गतिमा काम गर्नु, सुस्त हिँड्नु, बिस्तारै आँखा झिम्क्याउनु, रोकिई रोकिई बोल्नुजस्ता परिवर्तन स्वभावमा आउँछन्। हरेक काममा अचानक धिमा गति हुन्छ।